Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #450
O bu ihe itunanya na onweghi onye ozo kwurula banyere nke a.
I have installed several scenery add-ons ebudatara m na saịtị a, maka otu ma ọ bụ ha abụọ FSX na Prepar3D. None of the sceneries show up in the game(s) whatsoever. The airplane add-ons work fine, but I'm not so interested in those.
Enwetakwara m ebe a na Hawaii, ọ fọrọ nke nta ka 7 Gb, na Kauai kwa. Ihe niile m hụrụ n’egwuregwu bụ ndagwurugwu ihu ọchị dị ka na mbu.
Gịnị nwere ike ịbụ nsogbu ahụ?
Ndumodu ikpe azu: site StargateMax.
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #451
Nke mbu, echem na odi ezigbo agwa ikwu mara.
Nke abụọ, emela ka m dọọ gị aka ná ntị.
Nke ato, ihe omuma ndi ozo.
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #452
1) Ndewonu (nwute)
2) Lee, ekwesịrị m ikwu: Gụọ 4 n'okpuru.
4) Ok, aga m, enweghị nsogbu ọ bụla na m, ọ dị ka anyị abụọ na-atụle ibe anyị.
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #453
Echere m na amaara m onye Hawai'i ị na-ekwu maka ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iwunye gị MAKA ịgbakwunye ya na egwuregwu ahụ, jiri aka gị. Amachaghị nke B is nke a, mana mgbe ụfọdụ ọ bụ ya kpatara.
Ọ bụrụ na ejighi n'aka etu ị ga-esi mee lemme ahụ, m ga - enyere ya aka
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #454
Ka anyi mee ya dika nke a ...
Nke mbu, ikwesiri igwa m ihe ...
Install wụnyela ya nke ọma?
I mere ka mmegharị ahụ dị n’ime gị rụọ ọrụ FSX?
Kedu ngwugwu mara mma ị na-achọ ịwụnye?
Enweela m ọtụtụ ebe mara mma sitere na ebe a, yana niile ọ na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị na-eme ya ziri ezi.
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #457
Ka anyị bido dị mma, na -eche nke ahụ karịa.
Ndo banyere elu.
Etinyere m nnukwu Hawaii photoreal vol 1-2-3 mkpọ, Kauai, Mt. Everest, Fiji, Balearic agwaetiti v2.
Ndị wụnye n'ime ahụ kwuru na a ga-arụnye ha na akpaghị aka ma echere m na ha ga-egosi ya na Ọdụ Ọba.
Ahụghị m ihe ọhụụ na Ọba Oche (egwuregwu abụọ).
Echere m na ọ gbanwechara. Daalụ maka ịhapụ omume m, iwe were m ezigbo iwe mgbe ụbọchị 2 zachara m ya.
Enwere m olileanya na nzipu ozi a na-enyere onye ọ bụla ọzọ aka ịchọta ụdị nsogbu m mere.
Onweghị ụdị mods etinyere arụmọrụ apụta FSX na P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #464
Nke ahụ ka mma.
Enwere m otu ihe na-eme. Amaghị m ihe kpatara ya, mana ndị na-ebido ya na-eme ụfọdụ ihe jọrọ njọ. Otu mmelite kwesịrị ekwesị dị mkpa n'ezie.
Ọ dị mma ịhụ na ọ na-arụ ọrụ. Yabụ ugbu a ịnweta ya maka oge ọzọ mgbe ihe anaghị arụ ọrụ,, gwa anyị otu o kwere omume, nke ahụ ga - enyere anyị niile aka idozi nsogbu ahụ.